Clonezilla Live 2.7.1 inouya neLinux 5.10.9, kugadzirisa zvishandiso uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura kuvhurwa kwe iyo nyowani vhezheni yevakakurumbira Linux kugovera "Clonezilla Rarama 2.7.1" izvo yakagadzirirwa kutsanya diski kuumbana (mabhuroko anongoshandiswa chete anoteedzerwa) uye uko mabasa anoitwa nekuparadzira akafanana neaya echigadzirwa cheNorton Ghost chigadzirwa.
Mune iyi vhezheni nyowani yakapa kugovera yakagadzirisa hwaro hwesisitimu pamwe neLinux kernel kune vhezheni 5.10.9 uye kuti iyo sisitimu yekuona midhiya inoshanda neRarama masisitimu yakagadziridzwa, pakati pezvimwe zvinhu.
Kune avo vasingazive nezvekugoverwa uku, vanofanirwa kuziva izvozvo yakavakirwa paDebian GNU / Linux uye mune rake basa anoshandisa kodhi yemapurojekiti senge DRBL, Chikamu Chikamu, ntfsclone, partclone, udpcast.
Inobhururuka kubva kuCD / DVD, USB Flash uye network (PXE). LVM2 uye FS yakatsigira ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS +, UFS, minix, VMFS3 uye VMFS5 (VMWare ESX).
MuClonezilla pane yakakura cloning modhi pamusoro pemambure, iyo inosanganisira kufambisa kwetraffic mune multicast modhi, iyo inobvumidza diski dhisiki kuti riumbwe panguva imwe chete pane yakawanda nhamba yevatengi michina, pamwe nekukwanisika zvese kubatana kubva pane dhisiki kuenda kune imwe uye kugadzira backup makopi nekuchengetedza diski mufananidzo kune faira. Cloning inogoneka padanho remadhisiki ese kana zvikamu zvega.
1 Main nyowani maficha eClonezilla Live 2.7.1
2 Dhawunirodha Clonezilla Live 2.7.1
Main nyowani maficha eClonezilla Live 2.7.1
Mune vhezheni itsva yakawiriraniswa neDebian Sid package dhatabhesi saJan 27, Kunze kwaizvozvo Linux kernel yakagadziridzwa kuita vhezheni 5.10.9 (iyo yapfuura vhezheni yakashandisa kernel 5.9).
Kana zviri shanduko dzinomira kubva mushanduro nyowani, tinogona kuwana kuti iyo package exfat-utils yakatsiviwa necheti nyowani ye "exfatprogs" zvinoshandiswa, yakagadzirwa mushure mekunge mutyairi we exFAT wawedzerwa kuLinux kernel.
Chimwe chinhu chitsva chinoratidzika ndechekuti yakavandudza mashandiro ekuona midhiya nemaitiro anoshanda muRarama mode, Uye zvakare, Ocs-sr inopa mukana wekutsanangudza mafomati ezita rakapihwa zita remufananidzo (rinogona kusanganisira zuva, nguva, FQDN, UUID, MAC, nezvimwe muzita refaira).
Izvo zvinotaurwa zvakare mukuzivisa kuti iyo yekumisikidza yekupa iyo CIFS vhezheni inosanganisirwa ku samba_server (smb1, smb1.0, smb2, smb2.0, smb2.1, smb3, smb3.0, smb3.11, smb3.1.1) uye zvakare yakagadziridza rutsigiro rwe software RAID paLinux.
Leecher modhi (-l | -for-leecher) yakawedzerwa kune ocs-btsrv (BitTorrent server) uye rutsigiro rwunopihwa kuitira panguva imwe chete kuendesa akawanda madhijitari kuburikidza neBitTorrent
Yeimwe shanduko izvo zvinobuda mushanduro nyowani:
Mune ocs-sr uye ocs-onthefly, kugona kudzoreredza uye mepu diski zvine chirevo kune yayo serial nhamba yakawedzerwa.
Iyo yekutanga package inosanganisira iyo glances, ipv6calc, atop, usbtop, bashtop, python3-psutil, vnstat, uye iperf3 mapakeji.
Wakawedzera f3 toolkit yekuyedza madhiraivha.
Wakawedzera kugona kushandisa "- kununura" sarudzo yekukumbira ocs-sr mune iyo ocs-onthefly rairo.
Sarudzo yakawedzerwa ku prep-ocsroot yekumhanyisa fsck usati waisa system yemuno.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo Nezve kuburitswa uku, unogona kutarisa nezve ruzivo rwechiziviso Mune inotevera chinongedzo.
Dhawunirodha Clonezilla Live 2.7.1
Kana iwe uchifarira kukwanisa kurodha iyo nyowani vhezheni yeClonezilla kuti ukwanise kuyiyedza kana kuita yako backups nekukasira.
Iwe unongofanirwa kuenda kune webhusaiti yepamutemo yeprojekiti uye muchikamu chekurodha tichawana chinongedzo chekutora sisitimu, kana kana uchida Ini ndinosiya iyi link pano.
Saizi yeiyo ISO dhizaini dhizaini ndeye 300MB (i686, amd64).
Kana iri huwandu hwezvinodiwa pakuitwa kwaClonezilla, ishoma, nekuti sisitimu haina graphical interface, saka inongogumira kushandisa kuburikidza neiyo terminal.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Clonezilla Live 2.7.1 inouya neLinux 5.10.9, zvigadzirwa zvekushandisa uye nezvimwe